Jeff Wilcox, oo mas'uul ka ah u wareejinta Apple Silicon, wuxuu aadaa Intel | waxaan ka imid mac
Apple waxay soo bandhigtay jiilkii ugu horreeyay ee Apple Silicon dhamaadkii 2020. Tan iyo markaas, waxay soo bandhigtay M1 Pro iyo M1 Max waxayna sii wadaa inay ka shaqeyso jiilalka soo socda ee ay bilaabi doonto 2022. Si kastaba ha noqotee, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa lumiyay mid ka mid ah kuwa ugu mas'uulka ah kala-guurka: JeffWilcox.
Jeff Wilcox wuxuu ka tagay xafiisyada Apple dhamaadka December 2021. In xisaabtaada LinkedIn, waxaynu ka akhrisan karnaa sida uu ugu soo shaqeeyay shirkadda 8-dii sano ee la soo dhaafay isagoo hogaaminaya mid ka mid ah dadaallada ugu weyn uguna hamiga badan Apple sannadihii u dambeeyay:
Waa kan sida Wilcox u qeexayo shaqadiisa Apple:
Maamulaha kooxda naqshadaha nidaamka Mac, oo ay ku jiraan dhammaan qaab-dhismeedka nidaamka, daacadnimada calaamadda, iyo daacadnimada awoodda nidaamyada Mac. Waxay u horseedday u wareejinta dhammaan Macs ee Apple Silicon ee chip-ka M1, oo ay horumarisay SoC iyo nidaamka naqshadeynta ee ka dambeeya T2 coprocessor intaa ka hor.
Dhanka Intel, Jeff Wilcox waa hogaamiyaha kooxda macmiilka ee Architecture ee kooxda Injineerinka Naqshadeynta ee Intel, mas'uul ka ah naqshadeynta dhammaan Soc dhammaan qaybaha macaamiisha ee shirkadda.
Wilcox wuxuu ka shaqo bilaabay Intel bishaan Janaayo. Nasiib darro, tani maaha markii ugu horeysay ee Wilcox uu ka shaqeeyo Intel. Dhab ahaan, oo ay Apple ka saxeexday Intel halkaas oo uu ka soo shaqeeyay 3 sano oo ah injineer maamule.
Markii hore, wuxuu u shaqeeyay Nvidia iyo Magnum Semiconductor. Warqaddiisa sagootinta ah ee uu ku daabacay LinkedIn, waxaynu ka akhrin karnaa:
Sideed sano oo cajiib ah ka dib, waxaan go'aansaday inaan ka tago Apple oo aan raadiyo fursad kale. Waxay ahayd safar cajiib ah oo aan aad ugu faani kari waayay wax kasta oo aanu ku guulaysanay intii aan halkaas joogay, iyada oo ku dhammaatay u gudubka Apple Silicon ee M1, M1 Pro, iyo M1 Max SOCs iyo nidaamyada.
Aad ayaan ugu xiisay doonaa dhammaan asxaabta iyo saaxiibadayda Apple, laakiin waxaan rajeynayaa safarka xiga, kaas oo bilaaban doona bilowga sanadka. Wax badan oo soo socda!
Waxaan rajeyneynaa bixitaanka Wilcox ma saameeyaan qorshayaasha mustaqbalka ee Apple ee Apple Silicon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Jeff Wilcox, oo mas'uul ka ah u wareejinta Apple Silicon, wuxuu aadaa Intel
15 sano iyo in ka badan 270 milyan oo doolar oo ay uga mahadcelinayaan la shaqaynteeda (RED)